kufutshane nolwandle, ilali encinci endala - I-Airbnb
kufutshane nolwandle, ilali encinci endala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguChrista
I-109 m2 iflethi ye-attic kwi-3 per. Indawo yokuphumla / yokutyela, igumbi lokulala eli-1, i-sofa e-1,
Igumbi lokuhlambela eli-1, ii-terraces ezi-2. Ibanzi kwaye ilula, le ndlu inayo yonke into oyifunayo ukwenza iholide yakho ikhululeke. Ibekwe kwindawo ezolileyo kwilali yamandulo iPeratallada.
Ibanzi kwaye ilula, le ndlu inayo yonke into oyifunayo ukwenza iholide yakho ikhululeke. Ibekwe kwindawo ezolileyo yelali encinci kodwa edumileyo yamaxesha aphakathi, ibonelela ngeendawo zokutyela ezininzi kunye neebha kumgama ohamba lula.
Ibandakanya igumbi lokuhlambela le-en-suite, igumbi lokulala elikhulu eliphindwe kabini elikhokelela kwi-terrace yangaphandle. Igumbi lokuhlala elikhulu elivulekileyo kunye negumbi lokutyela elinokufikelela kwi-terrace. Kukho i-GEM eyongezelelweyo ye-terrace yophahla. ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye linencasa.
Le ndlu inayo yonke into oyifunayo ukuze uyive
Iilwandle, igalufa: Iilwandle ezininzi ezimangalisayo zinokufikelelwa ngaphakathi kwe-10-20 min kuxhomekeke kukhetho lwakho. Iikhosi zegalufa ezi-4 zifikeleleka lula. Ngokuqinisekileyo ukhetho olukhulu.
IPeratallada yenye yeelali zaseCatalonia ezixabisekileyo nezinomtsalane.
Intle ukuhamba kuyo, iindawo zokutyela ezininzi onokukhetha kuzo kunye nenani leminyhadala ngexesha leholide.
Iziganeko zomculo zamahhala zibanjwe kwibala lenqaba ngo-Agasti libhiyozela inkcubeko yaseCatalan.
Iilwandle ezininzi ezintle zinokufikelelwa kwimizuzu eyi-10-20 ngokuxhomekeke kukhetho lwakho.
Iikhosi zegalufa ezi-4 zifikeleleka lula. Ngokuqinisekileyo ukhetho olukhulu.
Eminye imisebenzi: Iminyhadala yomculo, iimarike zasekhaya, iilwandle ezintle ezikufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Christa
I am from Austria and have lived in various different countries.
My first home is switzerland and my second home is in Spain in Peratallada, near the beach.
I love cooking , reading, sports, walking with my lovely labrador dog, my home, family and friends.
I enjoy meeting people of all nationalities and I love to share a glass of wine with them whilst telling them about this lovely area.
I love cook…
Ndikhona ngeengcebiso malunga nommandla ukuba ziyafuneka. Xa ndingekho ePeratallada, kukho umntu endimthembayo, Lo mntu uya kukunceda.
Inombolo yomthetho: HUTG-005163